I-OnePlus yazisa ngee-Bullets Wireless 2 Headphones | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Ezinye izixhobo
I-OnePlus Bullets Wireless zii-headphone ezintsha Olu hlobo lwesiTshayina luthi thaca namhlanje. Sijongene nesizukulwana sesibini sale modeli apho uphawu lwaseTshayina longeza iimveliso ngakumbi kwikhathalogu yezixhobo zalo.
Isizukulwana sesibini seBullets Wireless esingazisiyo nantoni na entsha kuyilo, kodwa siyayenza ibhetri enkulu, ityala ngokukhawuleza kunye namava esandi aphuculweyo ukuba siyithelekisa neyokuqala.
Kwaye yintoni, kwaye kunokulindeleka, ukuba i-OnePlus Bullets Wireless 2 yayizifowuni ezingenazingcingo, Akunje. Ngamanye amagama, sinezintambo esinokuthi sizidibanise nazo kwii-smartphones zethu kwaye umahluko wokuba iinxalenye ezineebhetri zincitshiswe kakhulu.
Ke, sijamelene nee-headphone fikelela kwiiyure ezili-14 zokudlala ngentlawulo epheleleyo kunye nesithembiso seeyure ezili-10 zokumamela imizuzu eli-10 kuphela yentlawulo. Umsebenzi ophuculweyo ukusukela ngentsimbi yesi-8 yesizukulwana sokuqala ukuya kwentsimbi ye-10 namhlanje.
Phakathi kwezona zinto zibalulekileyo kwezi headphones sinokuzifumana Inkxaso yeaudio ye-24-bit aptX HD, iBluetooth 5.0 kunye nantoni eyiPair ekhawulezayo ukwenza uqhagamshelo olukhawulezayo kunye nefowuni ye-OnePlus; ukuba ibiyi-OnePlus 7 ibhetele kakhulu.
Kananjalo asinakulibala ukuba ezi ii-headphone "zinokubanjwa" ngemagnethi entanyeni yethu ukuze kungabikho thuba lilahlekileyo njengoko kunokwenzeka ngee-wireless.
Ngokubhekisele kwixabiso, I-Bullet Wireless 2 ifika ngexabiso lama-99 euros xa bethengisa nge-21 kaMeyi ukubakhetha ngombala omnye: indibanisela ebomvu nomnyama. Ezinye ii-headphone ezinomdla ezingenazingcingo ngokupheleleyo, kodwa ziya kutsala umdla wabaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Ii-headphone ze-OnePlus Bullets Wireless 2 zifika kwiiyure ezili-10 kunye nemizuzu eli-10 yeentlawulo